Kama hadleyno wax badan oo ku saabsan warshadaha muusikada halkan barta tiknoolajiyada suuqgeynta laakiin waa, laga yaabee, mid ka mid ah tusaalooyinka ugu weyn ee isbeddelka dhaqanka macaamiisha. Waxaan ka wareegnay warbaahinta muusikada una wareegnay aaladaha muusikada… iminkana waxaan ka wareegeynaa aaladaha oo waxaan u wareejineynaa. Waxaan ka tagay gabi ahaanba iTunes-ka waxaanan hadda u adeegsadaa wax walba 'Spotify'. Sahamintu waxay ku dhacdaa shabakadaha bulshada iyo idaacadda Spotify ee isku darka sida dhadhanka dhadhanka si ay iigu quudiyaan heeso cusub.
Waxaa jira hal Wal-mart oo keliya. Wal-mart waa shirkad kaliya leh hal soo jeedin qiimo: qiimo jaban. Waxay la shaqeysaa Wal-mart maxaa yeelay waxay iibin karaan badeecada isku midka ah oo ka raqiisan tafaariiqda soo socota. Ma tihid Wal-mart. Ma tagi kartid shaqada si aad u ogaatid sida qiimaha loo dhimo maalin kasta. Sidoo kale waa inaadan. Shirkaddaadu waa mid gaar ah oo waxay leedahay waxa shirkad kale aysan bixin karin. Hadafkaaga suuq-geynta waa inuu noqdaa inuu kala garto naftaada